I-Qt Creator 4.12 isivele ikhishiwe kanti lezi yizindaba zayo | Kusuka kuLinux
Ukwethulwa kwe- inguqulo entsha yemvelo yentuthuko edidiyelwe "Umdali we-Qt 4.12" okuyi yakhelwe ukudala izinhlelo zokusebenza ezinqamulelayo zisebenzisa umtapo wezincwadi we-Qt
1 Yini okusha kuQt Creator 4.12?
2 Ungayifaka kanjani i-Qt Creator 4.2 ku-Linux?
Yini okusha kuQt Creator 4.12?
Enguqulweni entsha, ifayela le- ikhono lokudlulisa amehlo futhi useshe isitolo sekhathalogi se-Qt Marketplace okuhlanganisiwe, lapho kusatshalaliswa khona amamojula ahlukahlukene, imitapo yolwazi, ama-plugins, amawijethi namathuluzi wonjiniyela. Ukufinyelela kukhathalogi kungenxa yekhasi elisha le- "Marketplace", elenzelwe ngokufana namakhasi okuphequlula izibonelo nemihlahlandlela.
Kungezwe isilungiselelo sokukhetha isitayela sokuphela kwemigqa (Windows / Unix), engafakwa emhlabeni jikelele nangokuhlangana namafayela ngamanye.
Ibuye inikeze ukusekelwa kokufometha amabanga wamanani nokusebenzisa umaki weMarkdown kwimininingwane ye-pop-up, uma isekela umshayeli wesiphakeli ngokuya nge-LSP (Protocol Yeseva Yolimi).
I-Las Amathuluzi wokuhlanganisa we-CMake athuthukise ukwesekwa komthombo_iqembu nezinketho zokwengeza indlela yokusesha yelabhulali ku-LD_LIBRARY_PATH. Lapho usebenzisa izinhlobo ezintsha ze-CMake ezithumela imibhalo ngefomethi ye-QtHelp, le mibhalo manje isibhaliswa ngokuzenzakalela ne-Qt Creator.
Se uhlele kabusha imvelo ukuthuthukisa izinhlelo zokusebenza ze-Android platform, Ngaphezu kwalokho, kwangezwa amandla okubhalisa izinhlobo eziningana ze-Android NDK ku-Qt Creator ngasikhathi sinye, ngesixhumanisi esalandela senguqulo oyifunayo ezingeni lephrojekthi. Kungezwe ukusekelwa kwe-Android 11 API (API level 30).
Ukusekelwa kohlelo lokwakha lwe-Qbs kushintshiwe ukuze kusetshenziswe ukufakwa kwangaphandle kwe-Qbs, kunokuxhumanisa ngqo nomtapo wezincwadi we-Qbs.
Imodeli yekhodi ye-QML ne-parser zenzelwe ushintsho kunguqulo ezayo ye-Qt 5.15.
Imenyu evelayo ye- "Symbols" ivele kuphaneli yokuhlela ikhodi ngokubuka konke kwezimpawu ezisetshenziswe kudokhumenti, ezifana nomsebenzi ofanayo ku-Locator.
Kungezwe izinketho eziningi ezintsha ezihlobene nokuqhutshwa kwephrojekthi, njengamandla okuchaza izilungiselelo zemvelo eziqondene ngqo nephrojekthi.
Kungezwe inketho yokulanda ngokuzenzakalela nokufaka wonke amathuluzi wokuthuthuka we-Android.
Ungayifaka kanjani i-Qt Creator 4.2 ku-Linux?
Bonke labo abanentshisekelo yokukwazi ukuzama umakhi we-QT kumasistimu abo kufanele bakwazi lokho ku- ama-distros amaningi we-Linux azothola iphakheji ngaphakathi kokugcina kwalokhu.
Yize ukubuyekezwa kwephakeji kuthatha izinsuku ezimbalwa ukufinyelela ezinqolobaneni, kungcono ukulanda isifaki ekhasini elisemthethweni le-QT lapho ungathola khona inguqulo yamahhala noma kulabo abafuna ukuthenga inguqulo yezentengiso (enezici eziningi) kwenze kusuka ekhasini.
Lapho ukulanda kwesifaki sekuqediwe, sizoyinika izimvume zokwenza ngomyalo olandelayo:
Manje, sizofaka iphakheji isebenzisa umyalo olandelayo:
Endabeni yabasebenzisi be-Ubuntu, ungadinga amaphakheji angeziwe ongafaka nawo:
Lapho lawa maphakeji efakiwe, uzokwazi ukuguqula incazelo yedeskithophu yakho bese ukhetha uhlobo olulungile. Ekugcineni, ungaqeda ukudala iphrojekthi bese uqhubekela phambili ekubhaleni ikhodi.
Manje kulabo abayi-Arch Linux, iManjaro, i-Arco Linux nabanye abasebenzisi be-distros base-Arch Linux bangakwazi ukufaka iphakheji ngqo kusuka ezinqolobaneni njengoba inguqulo entsha yomakhi we-QT isiyatholakala.
Ukufaka, vele usebenzise umyalo olandelayo ku-terminal:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Qt Creator 4.12 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo
IManjaro Linux 20.0 ifika neKernel 5.6, iPacman 9.4 nokuningi